လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial]
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Batch File Programming » လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial]
1 လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th September 2009, 6:02 pm
ပြီးရင်တော့ ခုနကအတိုင်း notepad မှာ ရေးပြီး test2.bat ဆိုပြီးသိမ်းပြီး ပြန် Run လိုက်ပါ...
pause ဆိုတာကတော့ ရပ်တာပါ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
-cls ဆိုတာရဲ့ အရှည်ကောက်က Clear Screen ပါ [You must be registered and logged in to see this image.] (Java သင်ဖူးတဲ့သူအားလုံးသိသလို ၊ ကွန်ပြူတာကိုင်ဖူးရင်တောင် သိပါတယ်) သူက Screen မှာရှိတဲ့ စာသားတွေကို ရှင်းထုတ် (ဖျက်ထုတ်) ပေးရုံသက်သက်ပါ။
-rem ဆိုတာက တကယ်တော့ remark ကို ခေါ်တာပါ. ဒါပေမယ့် သူက bat file run နေတုန်းမှာ မမြင်ရတတ်ပါဘူး. (ဘယ်အချိန်မြင်ရလည်းတော့ ကျနော်လည်းမသိဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] သိချင်ရင်တော့ ရှာလိုက်ကြပေါ့နော်)
(ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Press any ..... ပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] )
set ဆိုတာကတော့ တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်တာပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
Set အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ Run>>cmd>>set /? ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
အဲဒါကို set choice ဆိုပြီးတော့ အလွယ်ပြောင်းမြင်ကြည့်ရအောင် (/p ပါရင်ရှုပ်နေမှာဆိုးလို့ပါ.. ပြီးတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မေ့နေတာပါတယ်... နောက် သတိရရင် ပြန်ရှင်းပေးမယ်လေ. မရတော့လည်း မရှင်းတော့ဘူးပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.])
ဒါဆိုရင်တော့ အကယ်လို့ ကျနော်တို့က 1 လို့ရိုက်ထည့်ရင် choice ထဲကို 1 ၀င်မယ် ပြီးရင်တော့ Math ဆိုတဲ့ function အလုပ်ကို လုပ်ပါလိမ့်မယ်.(if မှာပါတဲ့ % ဆိုတာတွေကိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်မေ့နေလို့ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါရစေ) အခုက Basic အပိုင်းဆိုတော့ အဲဒါတွေ မသိသေးးလဲ ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး....
>>>> ဤ tutorial သည် Bat အကြောင်း တစ်ခုမှ မသိ၍ အခုမှ စတင်လေ့လာမည့် သူများကို ရည်ရွယ်ရေးသား ခြင်းဖြစ်ပြီး bat အကြောင်းတီးမိခေါက်မိရှိပြီးသူများ အဖို့ကတော့ နောက်လာမည့် အခန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဤ tutorial နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပါ ၊ အကြံပေးပါ ၊ ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါ ၊ ယခု ဆွေးနွေးထားသည် အထိထဲမှ သိလိုသည်များရှိလျှင် ၊ နားမလည်သည်များရှိလျှင် မေးပါ ၊ ကျနော် ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြပေးမည့်သူများရှိပါကလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆို လက်ခံပြီး ကျေးဇူးတင်မှာပါ။ သို့ပေမယ့် မကောင်းပြောပြီး သိပြီးသားတတ်ပြီးသားကို ရေးနေသည်ဟုထင်သောသူများမှ လာရောက်ပြောဆိုပါက မည်သည့်တုန့်ပြန်မှုမျိုးမှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ လေ့လာချင်သော သူများအတွက်သာ ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်၍ အကျိုးမရှိဟု ထင်ပါက ဖတ်မနေပါနှင့် ကျော်သာသွားလိုက်ပါ။ စရေးကတည်းက ကျနော် ရေးချင်လွန်းလို့ အားနေလို့ ရေးရတာလည်း မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတော်တော် များပြီးတော့ တောင်းတဲ့သူတိုင်းက ကျနော့် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေမို့ ရေးပေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ bat နဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများရေးပေးသွားပါ့မယ်။ အကုန်နီးပါးသိအောင် ဒီ tutorial တစ်ခုတည်းနဲ့ ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပေးကြပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်ဦးမယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] VB.NET 2008 နဲ့ C#.Net 2008 တို့ကိုလည်း E-Book ဖြစ်ဖြစ် ၊ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လို့ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ e-book ဆိုရင်တော့ အလကားပေးဖြစ်မယ်။ စာအုပ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း သှူဌေးမဟုတ်တော့ အရင်းအတိုင်းတော့ ရောင်းပေးမယ်ဗျာ။ E-Book ဖြစ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပါ့မယ်။
ဒီ့ Topic ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုလျှင် Myanmar IT Resource Forum အား Credit ပေးပါဟု လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
2 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th September 2009, 7:17 pm
အရမ်းအသုံးဝင်မယ့် post တစ်ခုပါပဲ့ဗျာ
3 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 19th September 2009, 9:52 am
Press any key to continue... (ကြိုက်တဲ့ Key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ)
Press any key to continue... (ဒီစာကြောင်းလေး နောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်လာမှာပါ။ နောက်ထပ် ကြိုက်တဲ့ Key ကို နှိပ်မှ Program က ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်)
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ call ပါ... call ဆိုတာကတော့ နောက်ထပ် batch file တစ်ခုကို ခေါ်သုံးတာပါ။
4 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 19th September 2009, 10:00 am
ကျနော်တို့ TuT ကို ပြန်စလိုက်ရအောင်....
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Code ကို Notepad မှာရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ့မယ်...
% တွေ /a တွေနဲ့ ကျန်တဲ့ နားမလည်တာတွေကို ချန်ထားခဲ့ပါ။ အကယ်လို့ ကျနော် အချိန်ရရင် Parameter တွေ အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထပ်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။ ခုတော့ ဒီတိုင်း သဘောပေါက်ရုံလောက်လေး ထားပြီး အဲဒါလေးကို Save ပြီးရင် Run လိုက်ပါ။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Code တွေကို Notepad ထဲမှာ ရေးလိုက်ပါ...
echo Hello.... What time it is!!!
အဲဒါကို Save ပြီး Run မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားသလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်...
Hello.... What time it is!!!
5 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 19th September 2009, 4:03 pm
ကျနော် ဒီတစ်ခေါက် ပြောပြပေးမှာကတော့ For Loop အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် နည်းနည်း မြင့်လာပြီဖြစ်လို့ သေချာလေး လိုက်လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ၁ခေါက်နဲ့ နားမလည်ရင် အနည်းဆုံး ၂ ခေါက်လောက်ဖတ်ပေးပါ။ ကျနော်ရေးထားတာ နားမလည်ရင်တော့ ကျနော့်ကို ပြန်မေးပါ။ ဖြေပေးပါ့မယ်။
ဒါဆို ကျနော်တို့ For Loop အကြောင်းလေး စလိုက်ရအောင်
6 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 20th September 2009, 11:38 am
ဒီပိုစ်လေးဟာ လေ့လာသူတွေအတွက် အကျိုးရှီပါတယ်
အခုလို မအားတဲ့ကြားက ရှင်းပြတဲ့အတွက် ညီကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
7 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 20th September 2009, 12:02 pm
ကျနော် တို့ရဲ့ TuT ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရအောင်....
ဒီနေ့မှာတော့ Condition စစ်ခြင်းကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
IF အကြောင်းကနေစတင်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ အရင်ရက်တွေက IF ကို Coding ထဲမှာ ထည့်သုံးခဲ့ဖူးပေမယ့် ကျနော် အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ့အတွက် If နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိနိုင်အောင် အခု ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အရင်ရက်တွေက ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ဟာတွေက Ref မရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခါရေးတဲ့ဟာကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်လည်စိတ်ပါလာပြီး IF နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ရေးပေးချင်တဲ့ စိတ်လည်း ရှိတာကြောင့် Google ကနေရှာဖွေပြီး Ref လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ Batch File Programs တွေကို Intel ရှိစေဖို့နဲ့ ပိုမို အသုံးတည့်စေလိုတဲ့ အခါတွေမှာ If statement တွေကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
သူ့ကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ parameter တွေ Variable တွေကို စစ်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ Task တစ်ခုစီကို အလုပ်လုပ်စေတာမျိုးတွေ ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး သူက ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ File ကို လိုချင်တဲ့နေရာမှာ ရှိမရှိကိုပါ စစ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ If ကို Variable တွေကို စစ်တဲ့ အခါမှာ သုံးတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်နိုင်ပါတယ်။
IF ဖြင့် File ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးခြင်း
File တစ်ခုကို ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ရှိမရှိကို စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အသုံးပြုလေ့ရှိတယ် If ရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းကတော့...
ကျနော့် ရေးသားပုံအတိုင်း If ရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းကို နားလည်လွယ်စေဖို့ ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Code ကို Notepad ထဲမှာ ကူးထည့်လိုက်ပါ....
IF EXIST c:\_autoexec.bat ECHO The File Exists at that place
အပေါ်က Code ရဲ့ အလုပ်လုပ်မယ့်ပုံစံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်...
သူက c:\_autoexec.bat ဆိုတဲ့ file ရှိမရှိကို စစ်ပါမယ် ၊ အကယ်လို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ echo နဲ့ 'The File Exists at that place' ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာအလုပ်မှဆက်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Code ကို မရှင်းပြတော့ ဘဲ Program အလုပ်လုပ်မယ့် ပုံစံကို ရှင်းပြလိုက်တာ နားလည်လွယ်မယ်ထင်လို့ ကျနော် ပုံစံပြောင်းပြီးရှင်းပြရတာပါ။ မနေ့က For Loop ကို ကျနော် code တွေကိုပါ ရှင်းပြတာ ၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေက နားမလည်ဘူးဆိုလို့ ဒီနေ့လည်း အဲလိုထပ်မဖြစ်ရလေအောင် Program Flow ကို ဘဲရှင်းပြသွားတာပါ။ For Loop ကို တော့ အခွင့်အခါသင့်လျှင်ထပ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
အခုကျနော်တို့ အပေါ်က ဥပမာကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကယ်လို့ File သာ မရှိတော့ရင် သူ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီ့လို မဖြစ်စေဖို့အတွက် ကျနော်တို့ဟာ else ပုံစံမျိုး အရေးအသားတစ်ခုထည့်ရေးလို့ရပါတယ်။ စဉ်းစားပုံကတော့ အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ file ရှိမယ်ဆိုရင် အလုပ်တစ်ခု လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ ၊ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် နောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ ဆိုတာကို အရင်ရက်က ကျနော်ရေးပေးဖူးတဲ့ goto command ကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။
ဘယ်လိုရေးကြမယ်ဆိုတာ နားလည်လွယ်စေဖို့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဥပမာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်....
IF EXIST C:\_syko.txt goto $ƴǩǾ
echo $ƴǩǾ exists
echo $ƴǩǾ doesn't exist
အပေါ်က ဥပမာကို Run လိုက်မယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်မယ့် ပုံစံကတော့....
အကယ်လို့ C:\_syko.txt သာရှိမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ goto ကို သုံးပြီးတော့ $ƴǩǾ ဆိုတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုဆီလွှဲထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် File သာရှိရင် အဲဒီ့ $ƴǩǾ ဆိုတာကို လုပ်မှာပါ။
အဲ.. အကယ်လို့များ file သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် စစချင်းရေးခဲ့တဲ့ Program မှာ လိုရပ်သွားမှာဆိုးတဲ့ အတွက် goto end ဆိုပြီးတော့ နောက်တစ်လိုင်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ စစ်ခြင်းအားဖြင့် File မရှိတော့ရင် Program ရပ်သွားချင်းမှ ရှောင်ဖယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Program က နောက်တစ်လိုင်းကို အလိုလိုဆင်းဖတ်ပြီးတော့ end ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ရောက်သွားမှာပါ။ ဒါဆိုရင် User အတွက်လည်း doesn't exist ဆိုတဲ့ message ကို ပြန်လည်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် IF နဲ့ ဖိုင်ရှိတာကို စစ်ပုံစစ်နည်းနားလည်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ File မရှိတာကို စစ်ကြည့်ကြရအောင်
ရေးသားပုံကတော့ ခုနကနဲ့ တူတူပါဘဲ။
IF NOT EXIST c:\_syko.txt ECHO It doesn't Exist
Code အလုပ်လုပ်ပုံကို အပေါ်မှာရှိတဲ့ exist နဲ့ တူတဲ့အတွက်ထပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။
ဒီလောက်ဆိုရင် NOT ထည့်သုံးတာလည်း သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
သတိပြုရန်၊၊ ၊၊ ကျနော်တို့ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် IF ကို အခါခါသုံးပြီးတော့ File ရှိမရှိစစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သိစေလိုပါတယ်။ အသုံးပြုလို့ရအောင် တစ်ကြောင်းရေးပြပါ့မယ်။
>>> IF EXIST c:\_autoexec.bat IF EXIST c:\_autoexec.bak ECHO Both Exist <<<
အပေါ်မှာကျနော် ရေးပြခဲ့တာတွေက File ရှိမရှိကိုဘဲ စစ်လို့ အဆင်ပြေတာပါ။ အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ဟာ directories တစ်ခုရှိမရှိကို စစ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ အခက်တွေ့ပါပြီ။ အဲဒီ့လို အခြေအနေမျိုးမှာတော့ NULL ဆိုတာလေးက အသုံးတည့်ပြီပေါ့ဗျာ။ NULL ဆိုတာကတော့ ဘာမှမရှိတာပါ။
DOS ကနားလည်တာကတော့ Directory တစ်ခုမှာ NULL ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့။ (ကျနော်လည်းမသိဘူး Google ပြောတာ။ )
ဒါဆို ကျနော်တို့ c:\_windows ဆိုတာများရှိလေမလားလို့ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်လားဗျာ။ အဲဒီ့လို စစ်ဆေးဖို့ကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ရေးခဲ့သလို IF EXIST ကို ဖြည့်ရေးသွားရုံပါ။ အောက်က Code ကို ကြည့်လိုက်ပါ။
IF EXIST c:\_windows\_nul ECHO c:\_windows exists
အဲဒီ့လိုနည်းမျိုးနဲ့ဘဲ Drive တစ်ခုဟာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ Drive ဟုတ်မဟုတ်စစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အောက်က Code ကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
IF EXIST c:\_io.sys ECHO Drive c: is valid
ဒီလောက်ဆိုရင် File ရှိမရှိကို IF နဲ့ စစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားလုံး စုံသွားပြီဖြစ်လို့ နောက်တစ်ခန်းမှာ User ရိုက်လိုက်တဲ့ Parameter တွေကို စစ်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်သွားပုံကို ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဝေဖန် အကြံပေး ထောက်ပြမှုများကို လက်ခံလျက်
8 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 21st September 2009, 8:39 pm
@echo off ။Script တိုင်းရဲ့အစမှာရေးရတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။Script ဟာ Dos Mode မှာ Rum မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအသုံးပြုနေသူရဲ့ Desktop မှာအစအလုပ် လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားလုံးသာမပါရင် C:\_Documemt and Settings\_User name\_Desktop ဆိုပြီးစ
မှာဖြစ်တောဒီစကားလုံးတွေရဲ့အကျိုးဆက်(echo)တွေရှိပြီးပရိုဂရမ် Run လို့ရသော်
လည်း Display Windows မှာရှူပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေစပြီး
တာပါ။ဒီစကားလုံးမပါဘဲ Program ကို Rum လိုက်ရင်လိုမိမိပြောချင်တာကို User
က "Do you want to hide Run Dialogbox(Y/N)?"ဆိုတဲ့စာသားဘဲပေါ်စေချင်တာပါ။လက်
တွေမှာတော့@echo off ဆိုတဲ့ Key Wordမပါတဲ့အတွက် Display Windows
မိမိကဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို user ကအလွယ်တကူနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
echo ။မိမိဖော်ပြချင်တဲ့စာသားတွေကို Display Windows မှာ Output ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ဒီ
Key Word ကိုသုံးပါတယ်။Script ရေးတဲ့အခါ Display Windows မှာပေါ်စေချင်တဲ့စကား
လုံးတွေကို echo နောက်မှာ space bar တစ်ချက်ပုတ်ပြီးရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
echo. ။echo နောက်မှာ fullstop ပါတာကတော့ Display Windows မှာစာကြောင်းအ
လွတ်တစ်ကြောင်းဖော်ပြချင်ရင်သုံးတာပါ။ Display Windows မှာစာကြောင်းတွေ့တကြောင်းနဲ့
: - ။Full Column နဲ့ Under Score သင်္ကေတနှစ်ခုပါတဲ့ဒီ Key Word ကတော့ဒါဟာ
ဒီသင်္ကေတအတွဲကလေးမပါရင် ပရိုဂရမ် Run မှာမဟုတ်ပါ။
colour ။ "colour" ဆိုတဲ့ Key Word ကတော့ Display Windows မှာပေါ်လာမယ့်
အောက်ခံအရောင်နဲ့စာလုံးအရောင်တွေအတွတ်သုံးတဲ့ Key Word ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နောက်မှာ
Hexa-decimal ဂဏန်းနှစ်လုံးတွဲတစ်စုံနဲ့ဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ 0A ဆိုရင်ရှေ့ကသုညက
Background Colour အနက်ရောင်လို့ပြောတာပါ။နောက်က A ဆိုတာက Font Colour အစိမ်း
ရောင်လို့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့် Colour 0A ဆိုရင်အောက်ခံအနက်မှာစာလုံးအစိမ်းရောင်
လိုမျိုးပေါ်မှာပါ။တကယ်လိုသာ Colour A ဆိုပြီးဂဏန်းတစ်လုံးတည်းပါရင်တော့
Background အရောင်ကိုပုံသေ အရောင်ဖြစ်တဲ့အနက်ပဲသုံးမယ်လို့ကွန်ပျူတာကယူဆပြီး
ရောင်တွေရမလဲ သိချင်ရင်(Key Word တစ်ခုရဲ့ Perameter တွေကိုသိချင်ရင်)Start/Run
ကနေ Run Dialobox ကျလာတဲ့အခါ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပါ။Command Window ပေါ်လာ
ရင်"color/?" ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါ။Enter နှိပ်ရင်ဘယ်စာလုံးတွေဟာဘယ်အရောင်တွေဆိုတာ
တွေ့ရမှာပါ။တခြားKey Word တွေနဲ့ပက်သက်လို့သိချင်တာရှိရင်လည်းဒီအ
9 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd September 2009, 10:35 am
$ƴǩǾ ရှင်းပြီးသားတွေနဲ့ တူနေသလားလို့။
သူမရှင်းရသေးတာတွေ ဖြည့်ပြီးရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာမိမှာ အမှန်ပါဘဲဗျာ
10 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd September 2009, 3:57 pm
အခုလို ၀င်ရောက် ထောက်ပြပေးတဲ့ Opera ကော ၊ အတူတကွ ၀င်ရှင်းပေးသွားတဲ့ မြိတ်အလုပ်သမားလေး ကို ကော အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
11 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd September 2009, 4:03 pm
ကျနော်တို့ရဲ့ TuT လေးကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်...
ကျနော် ဒီနေ့ ဆွေးနွေးကြည့်မှာကတော့ if နဲ့ parameter တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ program ကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။
IF နဲ့ parameter ကို ဘယ်လို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်က if ရဲ့ေ၇းပုံရေးနည်း (syntax) ကို ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Code ကို အောက်ကဥပမာလေးနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Copy %2 C:\_Users\_Administrator\_Desktop\_
echo You have copied %2 to your desktop
echo Delete Process Completed.
ဒီ ဥပမာလေးကတော့ ကျနော် ဟိုးအရင်ကစာအုပ်တစ်အုပ်ကနေတွေ့ထားတာလေးပါ။ စာဖတ်သူ ပိုမိုနားလည်စေဖို့အတွက် ကျနော် ပြန်ဖြည့်ရေးထားပါတယ်။ သူရေးသွားတဲ့ ပုံစံလေးကတော်တော် ကောင်းပါတယ်။
(အဲဒီ့စာအုပ်ထဲမှာကရေးသာရေးထားတယ် Code ကတိုကလည်းတိုသေးတယ် ရှင်းကမရှင်းပြထားဘူးဆိုတော့ ဘယ်လို ပြန်ရှင်းရင် အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ နားလည်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်ရတာ ကျနော့်မှာ တော်တော် တိုင်ပတ်သွားသေးတယ်။ ခုတော့ အိုကေသွားပါပြီ။ သူ့မူရင်း Code လိုလည်း တိုနှံ့နှံ့ဟုတ်တော့ဘူး။ နည်းနည်းရှည်သွားဘီ။ နားလည်ဖို့လည်း လွယ်သွားပါပြီ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.])
ဒီ Forum ထဲမှာ code ကို ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တောင် နားလည်နေတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ နားမလည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ကျနော်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ နားလည်ပြီးသားဆိုရင်လည်း ကျနော်ရှင်းတာ လိုသွားရင် ဖြည့်ပြောပေးကြပါဦး။
ဒီဥပမာမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ parameter ၂ ခုကို သုံးသွားပါတယ်။ ပထမ parameter ကို သုံးထားတဲ့နေရာကတော့ IF statement နဲ့ cp ဆိုတဲ့ parameter တစ်ခုကို %1 ဆိုတဲ့ user ဆီက ၀င်လာမယ့် ကောင်နဲ့ တိုက်စစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ တူတယ်ဆိုရင်တော့ COPY ဆိုတဲ့ Function ဆီကို သွားပြီးတော့ copy အလုပ်ကို လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ မတူခဲ့ရင်တော့ DEL ဆိုတဲ့ Function ဆီကို ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ parameter ကတော့ %2 ပါ။ %2 ကိုတော့ file name ကို လက်ခံရန်အတွက် အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ 1st parameter မှာ cp မရိုက်ထည့်ဘဲ တခြားဟာသာ ၀င်လာခဲ့ရင်တော့ DEL Function ဆီကို ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ %2 ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ပေးမယ့် file က ပျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ဥပမာလေးကို run ရင် ဘယ်လို run ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ကျနော် FOR Looping အကြောင်းရှင်းပြခဲ့တုန်းက တစ်ခါ ဒီလို ပုံစံမျိုးရေးပေးဖူးပါတယ်။ မေ့သွားတဲ့ သူတွေ အတွက် ပြန်ရှင်းပြပေးတာပါ။
--------------------------------------Program Run ပုံ အဆင့်ဆင့်----------------------------------------
Desktop ပေါ်မှာ Test ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Folder အသစ်တစ်ခု အရင်ဆောက်ပါ။
ပြီးရင် အပေါ်က Code လေးကို Notepad ထဲမှာေ၇းပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ Folder ထဲမှာ if.bat နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါ။
သူ့ရဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့ (C:\_Users\_Administrator\_Desktop\_Test) ဆိုပြီးဖြစ်နေရပါမယ်။
အဲဒီ့ Test ဆိုတဲ့ Folder ထဲကိုဘဲ text file တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တာ တစ်ခုခုထည့်ထားပါ။ နာမည်ကိုလည်း ကြိုက်တာပေးလို့ရပေမယ့် ကျနော် ပြောလို့ လွယ်သွားအောင် fortesting.txt နဲ့ သိမ်းထားပါ။
ပြီးရင် Start>>RUN>>cmd ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Command Prompt ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ ခုနက if.bat ဖိုင်လမ်းကြောင်း(C:\_Users\_Administrator\_Desktop\_Test) ဆီကို cd Command သုံးပြီးပြောင်းပေးပါ။
မိမိ path လမ်းကြောင်း>if.bat cp fortesting.txt
Enter ခေါက်လိုက်ပါက You have copied fortesting.txt to your desktop ဆိုတဲ့ စာလေးပေါ်လာပြီးတော့ Desktop ပေါ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ Test ဆိုတဲ့ folder ထဲက ဖိုင်လေးကို copy ကူးပြီးသားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အကယ်လို့များ cp ဆိုတဲ့နေရာမှာ တခြားတစ်ခုခု ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Delete Process Completed. ဆိုတဲ့ စာလေးပေါ်လာပြီးတော့ fortesting.txt ကို Test ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ ပျက်သွားတာတွေ့ရပါမယ်။
အထက်ပါ ဥပမာ ကို ကျနော်တို့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ချင်ရင် ပြုပြင်လို့ရပါသေးတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့ဟာ Program ထဲမှာဘာမှ မရိုက်ထည့်ဘဲနဲ့ parameter ကို အလွတ်ကြီးထည့်ပေးလိုက်ရင် error ပြအောင်ရေးလိုက်ဖို့ပါ။ ဘာမှ မခက်ခဲပါဘူး။ အောက်က Code လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။
IF "%1"=="" ECHO Parameter Error
အဲလိုဆိုရင်တော့ Parameter မပါတာနဲ့ Error Message ကို ပြပေးမှာပါ။ အဲလိုမျိုးပုံစံတူအနေနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဒုတိယ parameter ဖြစ်တဲ့ File Name မှာ အလွတ်ဖြစ်နေမနေကို လည်း စစ်ဆေးပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူ အနေနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပထမရေးပေးခဲ့တုန်းက file ၇ှိမရှိစစ်ဆေးသလိုဘဲ ဒီတစ်ခေါက် parameter စစ်တာမှာလည်း NOT ကို သုံးတာရှိပါတယ်။ သုံးပုံသုံးနည်း အတူတူ ဖြစ်လို့ မရေးပြတော့ဘူးနော်....
ဒီလောက်ဆိုရင် Batch File Programming နဲ့ ဘာတွေ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဥာဏ်ရှိ၇င် ရှိသလို ချဲ့ထွင် အသုံးပြုနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ bat ကို တအားကျွမ်းသွားရင် Windows တစ်ခုလုံးကို တောင် ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လို့ရသေးတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စမ်းကြည့်ကြတော့ပေါ့။ ကျနော်ရှင်းပြတဲ့အထဲမှာတောင် အနည်းအကျင်းပါနေပြီ။ (ကျနော့်တုန်းကဆိုရင် Command Prompt ကနေ del လို့ရိုက်လိုက်၇င် copy လုပ်သွားတာတို့ copy ဆိုရင် del တာတို့ အမျိုးမျိုးကလိကြည့်ဖူးတယ်ဗျ။)
စကားမစပ် ကျနော် တစ်ခုလောက် ပြောချင်ပါသေးတယ်.. ဟိုနေ့က ကျနော့်ရဲ့ bat tutorial ကို MZ မှာ သွားတင်ကြည့်တာ အစ်ကိုတစ်ယောက်က သူက ကျနော်ရှင်းပြတာတွေ နားလည်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်မှာ သုံးရတာတယ်ဆိုတာကိုတော့ ခုချိန်ထိမသိသေးလို့ပါတဲ့။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] အဲဒါ ကျနော် ဘယ်လို ပြန်ဖြေလိုက်ရင် ကောင်းမလဲဟင်။ ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမှန်းတောင် မသိလို့ ခုထိ မဖြေပေးရသေးဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒီနေ့တော့ အချိန်မရတော့လို့ ဒီလောက်ပါဘဲ။ ဆက်ရန်ကျန်သေးသည်........
စကားလက်ဆောင် >>> Some call it Windows, others the longest batch file of the world <<< [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 24th September 2009, 8:32 am
မနေ့က ကျနော် ဖျားနေလို့ ပိုစ့်တင်ဖို့ ပျက်ကွက်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီနေ့တောင် သိပ်နေမကောင်းသေးဘူး။
ဒါပေမယ့် မလာရင်လဲ မနေနိုင်လို့၊
ဒီနေ့တော့ If ကဲ့သို့ပင် Condition စစ်သော Choice Command အကြောင်းရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Choice Command အကြောင်းကတော့ ဘာသာပြန်ထားပြီးတော့ ကျနော့်ရေးပုံရေးနည်းဘက်ကို နည်းနည်း ပြန်ပြောင်းထားပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူကတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့် CHOICE နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူရေးထားတဲ့ မူရင်းကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ... အကယ်လို့ များ Choice နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားမလည်ခဲ့ရင်တော့ ကျနော့် ရဲ့ ဘာသာပြန်ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ အတူ မူရင်းရေးသားပုံရေးသားနည်းကနေ ကျနော့်ရေးပုံရေးနည်းကို ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် မကောင်းခြင်းလို့သာ မှတ်ယူပေးပါ။
ဥပမာ... ကျနော်တို့ ဟာ bat file တစ်ခုကို run နေစဉ်မှာ Program မပြီးဆုံးသေးဘဲနဲ့ CTRL+C ကို နှိပ်လိုက်လို့ ရပ်သွားရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ ဆိုရင် Error Level ကို3လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Program ဟာ သူ့ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးဆုံးသွားလို့ ပုံမှန် ပြီးဆုံးခြင်းမျိုးနဲ့ ဘာအနှောက်အယှက်မှ မရှိဘဲပြီးခဲ့ရင်တော့ Error Level ကို0ဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။ Error Level တွေဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ သီးခြားရပ်တည်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ ဘာမှ ပြဿနာမရှိနိုင်ပေမယ့် (သို့) အသုံးမ၀င်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ကို CHOICE ဒါမှမဟုတ် IF ERROR LEVEL တို့နဲ့ တွဲလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ဟာ အရမ်းကို အသုံးဝင် လာပါလိမ့်မယ်။
CHOICE command ကတော့ Keyboard ကနေပြီးတော့ user က ရိုက်ထည့်တာတွေကို လက်ခံပြီးတော့ key တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ error level ကို ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းကတော့
အဲဒီ့ Code တွေတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြပါ့မယ်။
string ဆိုတဲ့ အပိုင်းက သိပ်တော့အရေးမကြီးပါဘူး။ သူက CHOICE command run တဲ့အခါမှာ လိုချင်တဲ့ စာသားတစ်ခုခုကို ပြသပေးယုံပါ။
/C:keys ဆိုတာကတော့ User က ရိုက်လိုက်မယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ key တွေကို ညွှန်းတာပါ။ အကယ်လို့သာ key တွေကို ကြိုတင်မသတ်မှတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ default က Y/N ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က ဥပမာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ....
/N အကြောင်းရှင်းပြပါ့မယ်။ /N ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ ခုနက code ကို run တုန်းမှာ တွေ့ရမယ့် [A,1,T,0]? ဆိုတာ ကို မတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ အမည်းရောက်ပြောင်ကိုဘဲတွေ့ရမှာပါ။ ထိုသို့ /N ခံခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ ဘာကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ ကို မသိရတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ စိတ်ကြိုက်စာသားနဲ့လည်း User ဆီကနေ key တစ်ခုစီကို လက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ...
/T:key အကြောင်းဆက်လက် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ သူကတော့ default key ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ key တစ်ခုခုထဲက user က တစ်ခုမှ မရွေးဘဲ ဒီတိုင်းထားရင် အချိန်ကန့်သတ်ချက် တစ်ခုကိုေ၇ာက်တဲ့ အခါမှာတော့ /T နဲ့ program ကို default key တစ်ခုကို ရွေးခိုင်းလိုက်တာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်....
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Choice Command ကို အကြမ်းဖျင်းသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ CHOICE နဲ့ အတူ IF ERROR LEVEL ဆိုတဲ့ Command ကို အသုံးပြုပြီးတော့ error level သတ်မှတ်တဲ့ ပုံစံကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ CHOICE နဲ့ တင်ရပ်ထားပါ့မယ်။ CHOICE နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် .bat လေးတွေရေးကြည့်ကြပေ့ါ... ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
13 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 25th September 2009, 5:16 pm
ပထမဦးစွာ ကျနော်တို့ဟာ CHOICE command က Error Level ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ Return ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါသေးတယ်။
CHOICE command ကတော့ ကျနော်တို့ Program Run နေတုန်းမှာ key တစ်ခုခုနှိပ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ERROR LEVEL ကို return ပြန်ပေးသလို /C မှာ ပါတဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Key တစ်ခုခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လည်း return ပြန်ပေးပါတယ်။ အောက်က ဥပမာလေးကို ကြည့်ပြီးနားလည်မှာပါ...
Error Level တွေကို မလေ့လာခင်မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တစ်ခုသိထားရမှာက Error Level Code တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ User ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ key ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အပေါ်က Code မှာဆိုရင် S ကို နှိပ်ရင် ရမယ့် Error Level က 1 , Y ကို နှိပ်ရင်တော့2, 1 ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့3ဖြစ်ပြီးတော့2ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရရှိမယ့် error level က4ဆိုပြီးရရှိလာမှာပါ။ ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ CHOICE command အနေနဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ ERROR Level တွေကို Return ပြန်တယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ။
အခု ဆက်လက်ပြီးတော့ IF ERROR LEVEL command က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ၊ သူ့ကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာလေ့လာပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ရေးသားပုံရေးသားနည်းကတော့...
အဲဒီ့ကောင်ကတော့ လက်ရှိ Error ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သာ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပေးထားတဲ့(စစ်ထားတဲ့) အခြေအနေတစ်ခု (Error Level တစ်ခု) ဟာ မှန်တယ်ဆိုတော့မှ Program က အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အဲဒါကို ဥပမာ နဲ့ လေ့လာကြည့်ရအောင်...
ကဲ အောက်က ဥပမာ ဆီဆက်လိုက်ရအောင်....
CHOICE "Please Choose Your Browser" /C:12x /N
အခုတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒီ Bat ပိုင်းကို ပြန်လည်စိတ်ပါလာပြီဖြစ်လို့ အစက IF နဲ့ တင်ရပ်လိုက်တော့မလို့ဟာ အခု CHOICE ရယ် Error Level အထိပါရောက်လာပါပြီ။ နောက်ရက်တွေလည်း bat နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်ရေးပေးဖို့ စာပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ ရေးသင့်မရေးသင့်ကတော့ အခု Post တင်ပြီး ပြန်ဝင်လာတဲ့ Feedback တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။ Feedback က အမျိုးမျိုးရနိုင်တော့ ကျနော် (၃) ရက် စောင့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အဲလိုစောင့်ရတာကတော့ ကျနော်က ဒီဖိုရမ်မှာတင်မဟုတ်ဘူး တခြားဖိုရမ်တွေမှာပါ လိုက်တင်ထားလို့ပါ။ (၃) ရက်ဟာ လုံလောက်တဲ့ Feedback ရနိုင်တဲ့ အချိန်လို့ထင်လို့စောင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ စောင့်နေတဲ့ (၃) ရက်တာ ကာလအတွင်းမှာတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ Reversing Tutorial တွေ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ Reverse Engineering နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စတင်လေ့လာသူဆိုတော့ သိပ်မသိသေးလို့ လေ့လာမိသလောက် တွေကိုသာ ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု bat file လိုတော့ ဖိုရမ်တွေမှာ လိုက်ပြီးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် မနေ့ကမှ ဖွင့်လိုက်တဲ့ဘလော့လေး နဲ့ ကျနော့် ဖိုရမ်မှာ တင်ပြီးတော့ ၄ ခု ၊ ၅ ခုလောက်တစ်ခါ E-BOOK လုပ်ပြီးမှ ဖိုရမ်တွေမှာ ပြန်မျှဝေမယ်လို့လည်းစိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးတွေ လက်တွေ့ ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်တောင် အသေအချာ မသိလို့ ကတိမပေးနိုင်ပါဘူး... အဲဒီ့တော့ စိတ်ကူးအနေနဲ့သာ ကြိုတင်ပြောထားရင်း ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ နားပါရစေဦး...
Feedback များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော်လက်ခံထားသော ဆောင်ပုဒ်...
14 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 25th September 2009, 8:00 pm
15 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 25th September 2009, 8:01 pm
အစ်ကိုလည်း သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးဦးလေ။
16 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th September 2009, 12:08 pm
CODE တွေကို အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖော်ပြတာလေ
17 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th September 2009, 12:46 pm
ဒါပေမယ့် Code တွေအတူတူရှင်းကြမယ့်အစား ကျနော်လိုနေတာကို ထပ်ဖြည့်သွားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့
18 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th September 2009, 6:14 pm
$ƴǩǾ ပြောတာကိုပိုလက်ခံပါတယ်...Code တစ်မျိုးတည်းကို နှစ်ယောက်က ရေးမယ်ဆိုတော့ ရေးတဲ့ပုံချင်းမတူရင် ဖတ်တဲ့သူက နှစ်မျိုးထင်သွားနိုင်ပါတယ်... $ƴǩǾ ရေးထားတာအတော်ကိုကောင်းပါတယ်...ဆက်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်...
19 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th September 2009, 8:55 pm
အစ်ကိုလုပ်တာ notepad.exe မှအဆင်ပြေတယ်ဖြစ်နေတယ်
20 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th September 2009, 9:02 pm
$ƴǩǾ ရေ ညီရှင်းပြတာကိုလည်းအစ်ကိုသိချင်သေးတယ်နော်
reg add ။Registry ထဲကိုတန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်ချင်တဲ့အခါဒီ Key Word ကိုသုံးပါတယ်။သူ့မှာ Parameter တွေရှိပါတယ်။အသုံးများတဲ့ Parameter တွေကတော့/v၊ /ve၊ /t၊ /d ၊ /f တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
*/v ဆိုတာက Value တစ်ခုကိုနာမည်ပေးချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်။reg add ရဲ့နောက်မှာ Space တစ်ချက်ခြားပြီး /v ကိုရေးရပါတယ်။ပြီးရင် Space တစ်ချက်ခြားပြီးကိုယ်လိုချင်တဲ့ Value ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
*/ve ဆိုတာက Value name ကို User ကမပေးပါ။စက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Default ဆိုတဲ့အမည်ပဲသုံးမယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။
*/t ဆိုတာက Value ရဲ့ Data Type ကိုကြေညာတာပါ။Data Type အမျိုးစား(၅)မျိုးထဲကဘယ် Data Type ကိုသုံးမယ်ဆိုတာ /t ခံပြီးကြေညာရတာပါ။ဥပမာ REG_DWORD Data Type ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် /t reg-
dword ဆိုပြီး /t နောက်မှာ Space တစ်ချက်ခြားကာကိုယ်သုံးမယ့် Data Type ကို ဖော်ပြရပါတယ်။/t ဆိုတဲ့ Parameter မပါခဲ့ရင်တော့ Default Data Type အဖြစ်ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ REG_SZ ဆိုတဲ့
Data Type ကိုပဲသုံးမယ်လို့စက်ကယူဆပါလိမ့်မယ်။
*/d ဆိုတာက Data ကိုကြေညာတာပါ။ကိုယ်ထားချင်တဲ့တန်ဖိုးကို /d နောက်မှာ Space ခြားပြီးကြေညာထားရပါမယ်။
*/f ဆိုတာက Data တစ်ခုကိုထပ်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဖျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တဲ့အခါယခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုခုရှိခဲရင် ယခင်တန်ဖိုးတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ဖျက်မလားလိုပရိုဂရမ်က User ကိုပြန်မေးပါတယ်။
reg delete ။Registry ထဲကရှိပြီးသား Subkey တစ်ခုခု၊Value တစ်ခုခုကိုဖျက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ Key Word ကိုသုံးပါတယ်။Registry ထဲကိုတန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်ချင်လို့ reg add သုံးရင် Value name /v ၊သုံးမယ်
Data Type /t ၊သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုး /d တို့ကိုမဖြစ်မနေထည့်ပေးရပါတယ်။ဒီသုံးချက်ပြည်စုံမှာ Registry ထဲကိုတန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်လို့/ပြောင်းလဲလို့ရမှာပါ။(ခြွှင်းချက်က /t မထည့်လည်းရပါတယ်။မထည့်ရင်
Default Data Type ဖြစ်တဲ့ REG_SZ ကိုစက်ကအလိုလိုသုံးပါလိမ့်မယ်)တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုဖျက်ချင်လို့ reg delete ကိုသုံးရင်တော့ Value name /v တစ်ခုထဲကိုဖျက်တာနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။မှုလတန်ဖိုးရှိခဲ့ရင်ပြန်
မမေးနဲ့။တန်းဖျက်စေချင်ရင် /v နောက်မှာ Space ခြားပြီး /f ထည့်ရင်ရပါပြီ။
21 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th September 2009, 1:47 pm
Thank for sharing of this tutorial.
After finish,, can i get with PDF ?
22 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th September 2009, 3:43 pm
အစ်ကိုပြောတဲ့ အပေါ်ကတစ်ခုမှာ Notepad.exe ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ကျန်ခဲ့တာနေမှာပါ။ ကျေးဇူးပါ။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Reg ကို ထိန်းတာ ကိုပြောသွားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာ အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် ဒီနေရာမှာဘဲ PDF အနေနဲ့ ထုတ်ပြီးမျှဝေပေးမှာပါ။ အစ်ကိုလည်း ဖြည့်စွက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါလား။
23 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th September 2009, 9:59 pm
waiting for PDF version hurry hurry
24 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 12:14 pm
ကျနော် ဒီ Tuto လေးကို ၃ ရက်ခန့် နားခဲ့ရာမှ ဒီနေ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီ Tuto ကို တခြား ဖိုရမ်တွေမှာ ဆက်မရေးတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ၃ ရက်တိတိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည့်တိုင် လုံလောက်သော Feedback မရလို့ပါ။
ကျနော် ရေးနေတာ အပိုတွေများဖြစ်နေပြီလားလို့တောင် တွေးမိပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခု ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးရယ် ၊ ကျနော့်ဖိုရမ်လေးဖြစ်တဲ့ MITR Forum နဲ့ ကျနော့် ဘော်ဘော်တွေ အများစုနေတဲ့ MMSO တို့မှာဘဲ ဆက်ရေးပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အကယ်လို့များကျနော် ဆက်ရေးတာကို အားပေးမယ့်သူမရှိရင်တော့ ကျနော့်ဘလော့လေးမှာ ကျနော့်ဟာကျနော်ဘဲ မှတ်စုအနေနဲ့ သိမ်းထားလိုက်ပါတော့မယ်။
အဲ.. ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ နည်းနည်း လေရှည်သွားပြီ....
ဒီနေ့ ကျနော်ဆွေးနွေးပေးမယ့် အပိုင်းကတော့ Input/Output ရယ် Redirect လုပ်တာရယ်စတဲ့ အပိုင်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးမှာပါ။ ဒီအပိုင်းကတော့ ကျနော် သိပ်မသိလို့ Internet ပေါ်ကနေ ရှာတွေ့ထားတာတွေကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ကျနော်က အင်္ဂလိပ်လို သိပ်မဖတ်တတ်လို့ ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ ညံ့ချင်ညံ့နေပါလိမ့်မယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။
System တစ်ခုဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Output ကို Screen ကနေထုတ်ပြပြီးတော့ ၊ Input ကိုတော့ Keyboard ကနေလက်ခံပါတယ်။ အဲလိုလုပ်တာဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သိနေကြ မြင်ဖူးနေကြ လူတိုင်းသိတဲ့ လမ်းဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ ပျင်းရတာအမှန်ပါ။
အကယ်လို့များ Input တစ်ခုခုကို တခြားတနေရာရာကနေ လက်ခံပြီးတော့ Output ကိုလည်း တခြားနေရာတစ်ခုခုကို သွားထုတ်နိုင်ရင် ပျော်ဖို့နည်းနည်းကောင်းလာမှာပေါ့နော်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
Output ကို Screen ပေါ်သက်သက်တင်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြားနေရာမှာ သွားရှိနေစေချင်ရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ Output Redirection Operator ဖြစ်တဲ့ > ဆိုတာကို သုံးလို့ရပါတယ်။
> ဆိုတာက ဘာလုပ်ပေးလည်းဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ Desktop ဒါမှမဟုတ် တစ်နေရာရာကို Print Screen ဖမ်းပြီးတော့ Paint ထဲမှာ save လုပ်သလိုပါဘဲ။ သူကလည်း ကျနော်တို့ ရဲ့ bat program က ရလဒ်တွေ အဖြေတွေကို မှတ်ပြီးတော့ text file တစ်ခုအနေနဲ့ သိမ်းပေးတာပါ။
ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့....
အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ဟာ net ဆိုတဲ့ command အကြောင်းသိချင်လို့ Command Prompt ထဲမှာ help ဆိုတာရိုက်ပြီးတော့ မေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ထွက်လာမယ့် အဖြေတွေက နည်းတာမဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Screen နဲ့ လည်းမဆန့်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ၊ CommandPrompt က minimize ဖြစ်နေရင်လည်း scroll ဆင်းသွားတာ တအားမြန်လွန်းပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ အဖြေကို ပြန်ရှာတဲ့အခါ scroll bar ကိုအပေါ်တက်အောက်ဆင်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်လွန်းပါတယ်။
အဲဒီ့ပြဿနာမျိုးကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ Output Redirection ဆိုတဲ့ Operator လေးကို သုံးပြီးတော့ ထွက်လာမယ့် ရလဒ်တွေကို text file ထဲမှာ သိမ်းလိုက်တာ အဆင်အပြေဆုံးပါဘဲ။
အောက်က help > help.txt ဆိုတဲ့ Code လေးကို Command Prompt ကိုခေါ်ပြီးတော့ ရိုက်ကြည့်ပါ။
c:\_ကိုယ်ပေးချင်တဲ့လမ်းကြောင်း > help > help.txt
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ Command Prompt Screen ထဲမှာ ဘာမှကျလာမှာတော့မဟုတ်တော့ပေမယ့်။ ကျနော်တို့ ရွေးပေးခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအောက်မှာ help.txt ဆိုတဲ့ text file လေး ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ help ဆိုတဲ့ Command ကို ရိုက်လိုက်ရင်ရလာမယ့် အဖြေတွေကို save လုပ်ပေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ OK?
အဲ... တစ်ခုတော့ သတိပေးမယ်နော်။ text file ရဲ့ နာမည်ပေးရင် အရေးကြီးဖိုင်တွေရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ သွားမထပ်ပါစေနဲ့။
ဥပမာ ကျနော့်ဆီမှာ ကျနော့် Password တွေ သိမ်းတဲ့ password.txt ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီ့ password.txt ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ခုနက help.txt ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ကျနော် သိမ်းထားတဲ့ Password တွေအားလုံးကို Overwrite လုပ်ပလိုက်ပါတယ်။
တိုတို နဲ့ လွယ်လွယ် ပြောရရင်တော့ဗျာ အဲဒီ့ > ဆိုတဲ့ Operator လေးက file နာမည်တူနေတာ တွေ့ရင်တောင်မှ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ရှိပြီးသား စာတွေကို သူမှတ်ရမယ့် အဖြေနဲ့ overwrite လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာပါ။ အကယ်လို့များ file နာမည်အတူတူပေးမိခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်နော်။ ကျနော် သတိပေးတယ်။ file နာမည် တူတာမရှိရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူ့ဟာသူ အလိုလို create လုပ်ပေးသွားလိမ့်မယ်။
ခုနက overwrite လုပ်တတ်တယ်လို့ သတိပေးလိုက်တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ Overwrite လုပ်တာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းတစ်ခုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ထပ်ဖြည့်သွားတဲ့နည်းပါ။
အဲဒါကတော့ >> ဆိုတဲ့ Operator သုံးရမှာပါ။ ကျနော်တို့ ခုနက ဥပမာမှာဆိုရင်တော့ help.txt ထဲကို help ရိုက်ရင်ထွက်လာမှာတွေ သိမ်းထားပြီးပါပြီ။ အဲဒီ့ဟာတွေ အနောက်မှာ ထပ်ဖြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်က Code လေးနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
c:\_ခုနက help.txt ရှိတဲ့လမ်းကြောင်း > net >> help.txt
Command Prompt ထဲမှာ အဲဒီ့လိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရှိပြီးသား help.txt file ထဲမှာ net command ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ထပ်ဖြည့်ပြီးသားတွေ့ရမှာပါ။ ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
အလွယ်နည်းမှတ်ထားဖို့က >> ဆိုတာ ရှိပြီးသား file တစ်ခုထဲကို စာထပ်ဖြည့်တဲ့သဘောပါ။
ကျနော် ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ bat file အကြောင်းကနေ DOS ဘက်နွယ်သွားပြီထင်တယ်။ အစကတည်းကလည်း Bat နဲ့ DOS ဆိုတာ အတူတူပါဘဲ။ အဲဒီ့တော့ ကျနော်လည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ပြောပြချင်လို့ Internet ပေါ်မှာမွှေရင်းနဲ့ တွေ့တာတွေ အကုန်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာ။ ဟီး... အကျိုးတော့ရှိပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
DOS ရဲ့ Command တွေ အနေနဲ့ ခုနကလိုမျိုး File တွေဆီကိုသာ redirect လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး ၊ အမျိုးမျိုးသော Device တွေဆီကိုလည်း redirect လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာပါ။
Command အနေနဲ့ ရိုက်ရမည့် အမည် Device အမည်
COMn Serial Port (COM1, COM2, Com3, COM4)
CON Console (Keyboard, Screen)
LPTn Parallel Port (LPT1, LPT2, LPT3)
NUL NUL Device (ဘာမှမရှိတာကို ဆိုလိုတာပါ)
ဥပမာ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့.... အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ဟာ directory ရဲ့ list ကို Print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က Command ကို သုံးလို့ရပါတယ်။
c:\_မိမိ ရွေးချယ်သော နှစ်သက်ရာ လမ်းကြောင်း>dir *.* > prn
အဲဒါဆိုရင် စက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Printer ကနေ Print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ တခြား Command တွေလည်း သူတို့နဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အလုပ်ကို လုပ်ကြပါတယ်။
အဲဒီ့မှာ ခက်တာ တစ်ခုက NUL ဆိုတဲ့ Device ပါ။ ကျနော် အစက သူ့ကို ဘယ်နားမှာ သုံးရမယ်မှန်းမသိခဲ့ဘူးဗျ။
အဲဒါနဲ့ ဘော်ဒါကြီး ဂေါ်ဂယ် ဆီသွားမေးတော့ ဒီလိုလေးပြောထားလေရဲ့....
NUL Device ကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ 'bit bucket' လို့ခေါ်ပါသတဲ့။ သူ့ကို Redirect လုပ်ချင်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်ကြောင်း Message ပြချင်တာမျိုးမှာတော့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ... ကျနော်တို့ File တစ်ဖိုင်ကို DOS မှာ COPY လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ပြီးမြောက်ကြောင်းကို 1 file(s) coppied. ဆိုပြီးတော့ ပြတတ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးကို Redirect လုပ်တဲ့ အခါမှာ ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့....
C:\_မိမိလမ်းကြောင်း > copy test.txt > NUL
အဲဒီ့ အပေါ်က Code လေးသုံးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ 1 file(s) coppied. ဆိုပြီးတော့ ပြပါလိမ့်မယ်။ OK?
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ Output ကို Redirect လုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသွားပါပြီ။ နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ Input ကို Redirect လုပ်ကြည့်ပါမယ်။
25 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 12:15 pm
ကျနော် ဒီနေ့ အထိ ရေးပေးထားတဲ့ bat code တွေနဲ့ Virus Code ပေါင်းများစွာ ဖန်တီးနိုင်နေပြီဖြစ်သလို ၊ Computer ကို အကျိုးပြုမယ့် Code များစွာလည်း ဖန်တီးနိုင်သော အဆင့်ရောက်နေပါပြီ။
Reg ကို command နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ကိုလည်း ကို မြိတ်အလုပ်သမားလေး ရေးပေးပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေနဲ့ ကောင်းတာ လုပ်နိုင်သလို ၊ မကောင်းတာလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်အပေါ်မှာဘဲမူတည်တာပါ။
ပြီးတော့ Windows ရဲ့ GUI ကို ငြီးငွေ့နေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လည်း DOS ကို သုံးကြည့်ဖို့ အခြေခံကောင်းကောင်းရနေပါပြီ။ Command တော်တော်များများနဲ့လည်း Windows ကိုအသုံးပြုတတ်နေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Programming ကို စတင်လေ့လာနေဆဲ လူငယ် ၊ လူကြီး မရွေးလည်း ဒီ bat ကနေ အစပြုပြီးတော့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် Language တွေအတွက် အနည်းနဲ့ အများတော့ SYSTEM ပိုင်းဆိုင်ရာ Concept တွေမှာ အထောက်အကူပြုမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
ကျနော့် အနေနဲ့ ဒီ bat file programming နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်လို့ ရနိုင်တဲ့ Professional လိုင်းကို မသိသလို ၊ ဒီ bat ကို လေ့လာလို့ ဘာကြီးတော့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ မပြောတတ်ပါဘူး။
ကျနော့် အနေနဲ့ ကိုယ်တွေ့သိလာတာ အကျိုးအမြတ် ရလာတာတွေကတော့ GUI ကိုဘဲ သုံးနေတဲ့ အလွယ်လိုက်တဲ့ ခေတ်ထဲမှာ DOS ကို သုံးတတ်သွားတယ် ၊ နောက်ပြီးတော့ bat သေးသေးလေးတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေးပြီးတော့ PC ကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်တာ မြန်ဆန်လာပါတယ်။ အဲဒီ့ Bat File တွေနဲ့ High Level Language နဲ့ ရေးထားတဲ့ Program တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ High Level Language က မလုပ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း bat နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီ bat file programming ကို ၉ တန်း တုန်းက စပြီးတော့ လေ့လာဖူးတာပါ။ အဲဒီ့တုန်းကတော့ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။ ရှင်းပြပေးမယ့်သူလည်း မရှိဘူး။ ခုလို အင်တာနက်လည်း မသုံးခဲ့ရဘူး။ Code တွေ့ရင် မှတ်ထားတယ်။ Code တစ်ခုချင်းဆီကို လျှောက်စမ်းတယ်။ ဘယ်ဟာက Command ၊ ဘယ်ဟာက Operator လည်းမသိဘူး။ သီအိုရီ မသိတဲ့ လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်လို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့ကနေ ကျနော် ၁၀ တန်းရောက်တော့ အဲဒါတွေ အကုန်မေ့ထားလိုက်တယ်။ ၁၀ တန်းပြီးမှ VB ကိုလည်း စကိုင်ရော ၊ ၉ တန်းတုန်းက ငါလေ့လာခဲ့တာ ဘယ်လို အမျိုးအစားတွေပါလား ဆိုပြီးတော့ သိလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ bat ကို ပြန်လေ့လာပါတယ်။ အဲဒီ့တော့မှ စနစ်တကျပြန်သိခဲ့တာပါ။ ပြန်လေ့လာတဲ့ အခါမှာတော့ ရည်ရွယ်ချက်က virus ရေးဖို့ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခုတော့ အဲလိုဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ် ရေးချင်တော့ဘူး။ သူများကို ဒုက္ခမပေးချင်တော့လို့ ၊ ကောင်းရာ မွန်ရာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ယုံတယ်မှလား။
ဒီစာတွေ ဘာလို့ရေးနေရလဲဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို Gtalk မှာ လူတစ်ယောက်က “မင်း Tutorial ကြီးကို ငါအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ အဲဒါဖတ်ပြီးတော့ ငါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလည်းမသိရပါလား။ အဲဒါလေ့လာရင် ငါ့မှာ ဘာအကျိုးအမြတ်ရမှာလဲ။ မင်းကကော ဘာလို့ အကျိုးမရှိတာကို လျှောက်ရေးနေတာလဲ” ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားပါတယ်။
အဲဒီ့စကားကို ကြားကြားချင်းတုန်းကတော့ ကျနော်လည်း တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။ ကျနော် စရေးကတည်းက ပြောသားဘဲ အကျိုးမရှိဘူးထင်ရင် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့လို့။ ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဥာဏ်စွမ်း ဥာဏ်စ နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ် လေ့လာမှုတွေနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လို အပြောခံရပြီးနောက်တစ်နေ့ကျတော့ MMSO မှာလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက်က ကျနော့် Gtalk က တစ်ယောက် ကျနော့်ကို ပြောသွားသလိုမျိုးလေး အဓိပ္ပါယ်ခပ်ဆင်ဆင်နဲ့ ၀င်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူရေးတဲ့ အရေးအသားကလည်း ကောင်း ၊ ရေးတာကလည်း အပေါ်စည်းကမဟုတ်လေတော့ ကျနော် သူရေးတာသေချာဖတ်ပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှဘဲ သဘောပေါက်သွားတော့တယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့ ကျနော် အပြောခံရရင်လည်း ပြောချင်စရာ... ကျနော် ဒီ Tuto ကို ရေးသာရေးလာတယ်။ bat file တွေ နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရတယ်။ သူကတော့ ဘယ်လို အမျိုးအစားပါ ၊ အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မပြောခဲ့ရဘူးဗျ...
အဲဒါကြောင့် ကျနော် အခု ဒီစာလေးရေးပြီးတော့ ဘာလုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာ နည်းနည်း ပြောပြပေးတာပါ။ အရင်က မပြောမိခဲ့လို့ ဘာမှန်းမသိ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေကို လည်း အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံးရေးသားတဲ့ tutorial လေးဖြစ်လို့ အမှားအယွင်းတွေပါသွားတာပါ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စရေးရတယ်ဆိုတာလည်း Guide Line ရှာမတွေ့ခဲ့လို့ပါ။ အားလုံးဘဲခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ နားလည်ပြီပေါ့နော်..... bat က ဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေ။ ကျနော့် ကိုယ်တွေ့ပါ ရေးပေးထားတယ်နော်။
ဘယ်လောက် Level အထိ သွားနိုင်တယ် ၊ Pro ကျကျ ဘယ်လောက်ထိ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာ ရေးထားသလိုဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့သာလျှင် ဆိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် တော်ရင် တော်သလောက် အောင်မြင်မှာပါ။ ပညာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာထားလို့ အလကားဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ သူ့နေရာနဲ့ သူအကျိုးရှိပြီး အသုံးဝင်မှာပါ။ လေ့လာထားတာတော့ မမှားဘူးထင်တာပါဘဲ။
ကျနော့် ထုံးစံအတိုင်းလေး ဥပမာနဲ့ ပြောရရင်ဗျာ ကျနော်တို့ ရေကူးသင်ထားတယ် ဆိုပါတော့။ ရေကူးသင်တာ Pro တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံရှာဖို့ သင်ထားတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန် ရေလမ်းခရီးသွားလို့ ဒုက္ခရောက်ရင် ရေကူးတတ်ရင် နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ပိုက်ဆံအရေးတကြီးလိုလို့ ရေကူးပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာ ကံကောင်းပြီး နိုင်ချင်လဲ နိုင်သွားနိုင်တာပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ရေလည်းမကူးတတ် ဒုက္ခကလည်း ရောက်နေ ၊ ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတာနဲ့ ကလည်း အဲဒီ့နေရာမှာ အသုံးချလို့မရရင်တော့ ???
ထပ်ပြီးတော့နှိုင်းပြနေရင် သာဓကတွေ ဥပမာတွေနဲ့ တင် နောက်ထပ် စာကြောင်းရေ ၁၀၀ လောက်ရသေးတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒီ Bat File Programming က Professional တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လို့ရမှာလားလို့ ထပ်မေးရင် ကျနော်ကတော့ မသိဘူး ၊ ဒီပိုစ့်ကို ပြန်ဖတ်လို့ဘဲဖြေမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ အဲလိုမေးတဲ့ သူကို ဘယ်ပညာကို ဖြစ်ဖြစ် Pro တစ်ယောက် အဖြစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရပ်တည်နိုင်မှ လေ့လာမှာလားလို့ ပြန်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်နိုင်မှ လေ့လာမယ် ဆိုရင်တော့လည်း.......................
ဒီ Post ကို တင်လိုက်တာ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ ကျနော်လိုသွားတဲ့ အမှားရယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာရင် ဘာကြောင့်လေ့လာကြတာလဲ ဆိုတာရယ်ကို သိချင်လို့ ကျနော့် အထင် ကျနော့် အတွေးနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိုက်ရိုက်သို့ သွယ်ဝိုက်ထိခိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် ဒီနေရာကနေ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
စာဖတ်သူ ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ ဒီနေ့အတွက်တော့ ဒီမျှနဲ့ ရပ်နားပါရစေ။
နောက်နေ့မှာတော့ Input Redirect နဲ့ ပြန်စမယ်နော်။
26 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 6:37 pm
တစ်ခုလောက်ဝင်ပြောချင်ပါတယ်..အပေါ်က $ƴǩǾ ရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါ့....ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြောနေရင်....လိုက်ရှင်းနေရင်အချိန်မကုန်ဘူးလား...ဖတ်တဲ့သူတွေကရော...ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတာလေးတွေကိုတွေးပြီး မစမ်းသပ်နိုင်ဘူးလား...ဘယ်သူ့ဘယ်သူ့ကိုမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး...ဒီ code တွေကို ထွင်ပေးသွားတဲ့သူတွေက ထွင်ပေးသွားပြီးပြီ...ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်လေ့လာတာပါပဲ...အဲ့ဒါလေးကိုတောင် ကိုယ့်ဟာကို ချဲ့ မတွေးနိုင်ကြဘူးလား....
ဒီစာတွေ ဘာလို့ရေးနေရလဲဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို
Gtalk မှာ လူတစ်ယောက်က “မင်း Tutorial ကြီးကို ငါအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သာ
ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ အဲဒါဖတ်ပြီးတော့ ငါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလည်းမသိရပါလား။
အဲဒါလေ့လာရင် ငါ့မှာ ဘာအကျိုးအမြတ်ရမှာလဲ။ မင်းကကော ဘာလို့
အကျိုးမရှိတာကို လျှောက်ရေးနေတာလဲ” ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီ့စာသားလေးကိုမခံချင်လို့ပါ...ရေးတဲ့သူကလည်း ပညာရပါစေလို့ရေးပေးတာပါ..လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိမှာပေါ့... ဒါပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးပြန်ကြည့်ပြီးမှပြောသင့်တယ်... ကိုယ်နားမလည်တိုင်း ကိုယ်မသုံးတတ်တိုင်း... ရေးတဲ့သူမကောင်းလို့ ဆိုတာကြီးကိုပဲ မပုံချသင့်ဘူး... ...ကျွန်တော် တွေးမိတာလေးဝင်ပြောတာပါ
27 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 6:42 pm
ကျနော်လည်း စစချင်းကတော့ စိတ်ဆိုးတယ်ဗျ
ဒါပေမယ့် ခုတော့ စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူး
ကျနော် လိုတာလည်း ပါလို့ အပြောခံရတယ်လို့ဘဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
28 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 6:48 pm
bat ဖိုင်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုသိအောင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ speaking compurter bat
တစ်ချို့ virus တွေဆိုရင် bat နဲ့တောင်ကွိသွားတာဗျ
29 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 1st October 2009, 5:50 pm
ကျနော်လည်း ဖိုရမ်ကို ပြင်နေရတာနဲ့ ဒီရက်ပိုင်း စာမရေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျနော့် ပိုစ့်ကို စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်း သိလိုက်ရလို့ ဒီနေ့တော့ မရရတဲ့ အချိန်မှာရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျနော်ဆွေးနွေးပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Input ကို redirect လုပ်ခြင်းပါ။
သူမှာ့လည်း ကျနော်တို့ Output မှာတုန်းက လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပါဘဲ Operator တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ < ဆိုတာလေးပါ။ Output မှာတုန်းက > ဖြစ်ပြီး အခု Input မှာတော့ < ပါ။
C တို့ C++ တို့နဲ့ နည်းနည်းဘဲကွာတယ်နော်။ ဟိုမှာက cout<< နဲ့ cin>> လေ... သိပ်မလွဲပါဘူး။
Input Redirection Operator ကို ဘယ်လိုသုံးကြလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ် ၊ ကျနော်တို့ text file မှာ ရှိတာတွေကို DOS ထဲပြောင်းထည့်တဲ့ အခါမျိုးမှာ သုံးကြတာပါ။ Output တုန်းက DOS ကနေ text file ဆီကို လွှဲပြီးတော့ အခု Input မှာတော့ text file ကနေ DOS ကို လွှဲတဲ့သဘောပါ။
သူ့ကိုတော့ ကျနော်တို့ဟာ Command တစ်ချို့နဲ့ တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ Command တွေကတော့ MORE နဲ့ TYPE ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
MORE ဆိုတာက ကျနော်တို့ရဲ့ Text File ထဲက စာသားတွေဟာ တအားရှည်တဲ့ အခါမျိုးမှာ Screen တစ်ချပ်စာကို တစ်ခါပြပေးတဲ့ command ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Scroll ဆွဲရန်လိုတဲ့ စာသားတွေကို Screen Size ဆန့်သလောက် တစ်ခါဆီပြပေးတဲ့ command ပါ။ သူက Enter တစ်ခါခေါက်ရင် တစ်လိုင်းဆင်းပေးပါတယ်။ (ရေးထားတာ ရှုပ်လို့ နားလည်ပါ့မလားမသိဘူး)
TYPE ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ Text File ထဲက စာသားရှိသလောက်ကို တစ်ခါတည်းနဲ့ Scroll ဆွဲပြီးပြတဲ့ Command ပါ။ သူ့ရဲ့ Scroll လုပ်သွားတဲ့ speed က တအားမြန်တော့ အောက်ဆုံးရောက်ပြီးမှ အပေါ်ကို တစ်ခါ ပြန်တက်ရရင် ၊ စာတအားရှည်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (ဒါကော နားလည်ရဲ့လား။ နားမလည်ရင် ပြန်မေးပါနော်။)
အဲဒီ့ Command နှစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ ၊ ဘယ် Command က ကိုယ်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မယ်။ အသုံးပြုမယ့်သူနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပြီး သုံးကြပါ။ (ကျနော်ကတော့ TYPE မှ TYPE ဘဲ... More က enter ခေါက်ရတာ လက်ညောင်းလို့။ )
ဘာကွာသလဲဆိုတာ သေချာသိချင်ရင် အောက်က Code ကို Command Prompt ထဲမှာ သွားရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
C:\_မိမိ import (or) redirect လုပ်မယ့် file ရှိသည့်လမ်းကြောင်း > MORE < filename.txt
Enter ခေါက်လိုက်လို့ ကိုယ် import လုပ်ထားတဲ့ Text File ထဲက စာက Screen မဆန့်ဘူးဆိုရင် ၊ ----MORE---- ဆိုပြီးတော့ Screen အောက်ဆုံးမှာ ပိတ်ထားလိမ့်မယ်။ Enter တစ်ခါခေါက်ရင် တစ်ခါဆင်းသွား ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ key strokes တွေကို DOS ထဲကိုလုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးပါ့မယ်။
အဲဒီ့အပိုင်းမပြောခင် PIPING အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
PIPING ဆိုတာကတော့ Pipe Operator ဆိုတဲ့ | ဆိုတာလေးကို သုံးပြီးတော့ Input နဲ့ Output ကို ရောလိုက်တာပါ။ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ Command တစ်ခုက ထွက်လာတဲ့ Output တစ်ခုကို ၊ အခြား Input တစ်ခု အဖြစ် သုံးပေးတာပါ။ (ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ဖတ်တာတောင် နည်းနည်းရှုပ်နေသလိုဘဲ မရရင် ပြန်မေးပါနော်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေပေးပါမယ်။ ကျနော် သိပ်မအားလို့ အတိုချုံ့ရေးထားရတာပါ။)
နားမလည်မှာစိုးလို့ ဥပမာနဲ့ ပြောကြည့်ပေးပါမယ်....
အကယ်လို့ ကျနော်တို့ဟာ del *.* ဆိုပြီးတော့ command တစ်ခုကို DOS မှာ ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုပါတော့.... အဲလိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ System က ကျနော်တို့ကို ပြန်ပြီးတော့ Confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ y/n ဆိုပြီးပေါ့။ အတည်ပြုဖို့ တစ်ခုခု ရိုက်ထည့် ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အကယ်လို့ ကျနော်တို့ ဟာ ဖိုင်တွေကို ဖျက်မှာ သေချာတဲ့ အတွက် y ဆိုပြီးတော့ နှိပ်မယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူမေးတာကို မစောင့်ဘဲနဲ့ အဲဒီ့ အမေးအတွက် y ဆိုတဲ့ key ကို Pipe Operator သုံးပြီးတော့ တစ်ခါတည်းပေးလိုက်ပါမယ်။ (ရှင်းတာ နားမလည်လောက်ဘူးထင်တယ်...)
နားလည်သွားအောင် အောက်က Code ကို ကြည့်ပါ။
c:\_Users\_SYKO> echo y | del *.*
အဲဒီ့ Code ကို ကြည့်ရင်တော့ နားလည်ပြီထင်ပါတယ်။ echo နဲ့ y ကို ရိုက်ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် y ဟာ အဲဒီ့ အချိန်မှာ output တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာတော့ | ဆိုပြီးတော့ Pipe Operator တစ်ခုသုံးထားပါတယ်။ အဲလိုသုံးထားတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ဟာ del တဲ့ Command ကလိုအပ်တဲ့ import တစ်ခုဖြစ်တဲ့ y နေရာမှာ ခုနက ထွက်လာတဲ့ output ဖြစ်တဲ့ y ကို သုံးလိုက်ပါတယ်။OK? (ဟူး... ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ သဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်။)
အခုရေးခဲ့တဲ့ နည်းတွေကတော့ Input Redirect လုပ်နည်းများဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ Keyboard ကနေ Input သွင်းတာထက် ၊ မိမိရဲ့ System ထဲမှာဘဲ Input ကို လှည့်သုံးသွားတဲ့နည်းပါ။ လုပ်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ (အခု စာဖတ်သူတော့ ပျော်မပျော်မသိဘူး။ ကျနော့်အတွက်တော့ ဒါတွေ လေ့လာခဲ့ရတဲ့ အချိန်ဟာ ပျော်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ Screen မဲမဲကြီးမှာ စာတွေ ကျလာတာကို ပျော်ခဲ့တာလေ။ အခုတော့ ပျက်ဆီးနေပြီ... ဘာမှလုပ်ချင်စိတ် ၊ လေ့လာချင်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။)
Batch File Programming က တကယ်လေ့လာရင် အရမ်းကို လွယ်တဲ့ဟာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ သုံးတတ်ရင် သုံးတတ်သလို အကျိုးလည်းရှိပြီးတော့ ၊ သုံးရတာလည်း တကယ် ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူ့ကိုလေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်လည်း တခြားဟာတွေလို များများစားစား knowledge ရှိစရာမလိုပါဘူး။ DOS Command တွေကို နည်းနည်းပါးပါး အကျွမ်းတ၀င်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘဲ လုပ်စားလို့ရနေပြီ။
DOS Command တွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လေ့လာလို့ရတဲ့ site တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီ့မှာလေ့လာပါ ၊ ဖတ်ပါ ၊ မှတ်ပါ ၊ သင်ယူပါ ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲလို site တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် DOS ရဲ့ Hidden Command တွေလည်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ပြီးတော့ လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင် Batch File Programming မှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အပေါ်မှာရေးခဲ့ဖူးတုန်းကလိုဘဲ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်ရင် ဘာလုပ်လို့ရလဲတော့ မမေးကြနဲ့နော်။ ကျနော်လည်း Bat ကို အိတ်စပါတ် မဟုတ်သလို စပယ်ရှယ်လစ် လဲဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလည်း ကိုယ့်ပေါ်ဘဲမူတည်တယ်နော်။ ကျနော် ပြောတာ ၂ ခါရှိပြီ... ထပ်မေးကြနဲ့ )
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ဘဲနော်။ နောက်တစ်ခါ ဘာရေးရမယ်မှန်းက ခုထိမသိသေးလို့ ၊ ဒီနေ့တော့ နောက်တစ်ခေါက် ဘာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောခဲ့တော့ဘူးနော်။ တားတားဖိုရမ်လည်း ပြင်ဆင်နေရသေးလို့ ၊ ကျန်တာ ခေါင်းထဲ သိပ်မ၀င်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပိုစ့်တင်မှ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာ ကြည့်ပေတော့။ တာ့တာ.....
စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ကွန်နက်ရှင်ကောင်းကောင်း ရကြပါစေ
30 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 9th October 2009, 6:39 pm
$ƴǩǾ ရေညီလေးရေးပြီး သမျှ batfile သင်ခန်းစာတွေကို အစ်ကို pdf ပြောင်းထားပါတယ်...........ဒါပေမယ့် web ပေါ်ကနေ direct ပြောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်အဆင်တွေလွဲနေပါတယ်ကွာ................ဒါကြောင့်လင့်တစ်ခုအနေနဲ့ မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး .........ဒါပေမယ့်လိုချင်တဲ့သူရှိရင်တော့..........ကျွန်တော့်ဆီ pm ပို့ ပေးထားပါနော်.........ကျွန်တော်လင့်တင်ပေးပါ့မယ်..........လောလောဆယ်တော့ညီလေးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ..........အကြမ်းထည်ဖြစ်နေလို့ အစ်ကိုလင့်မတင်သေးပါဘူး.......
31 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 9th October 2009, 9:58 pm
window သုံးသမျှ batch ကတော်တော် အသုံးဝင်ပါတယ် ။ ဒီက အကိုတွေတော်တော်လေ့လာထားတာပဲ ။ ကျနော် တော့ ရေးတတ်ယုံနဲ့ ဖတ်တတ်ယုံလောက်ပဲ သိတယ် bat ကို ။ ဒီဆိုဒ်ရဲ့ ကျနော် ပထမဆုံး စိတ်ဝင်စားဆုံး ပိုစ်ပါ ။ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ ကို skyo
32 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th October 2009, 4:15 pm
33 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th October 2009, 9:39 am
ကျနော် လောလောဆယ်မှာတော့ တခြားကိစ္စတွေနဲ့ လုပ်ပန်းနေရတဲ့ အတွက် Tutorial ကို ဆက်မရေးဖြစ်သေးပါဘူး။
အကယ်လို့ဆက်လက်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ဆက်မရေးခင်လေးမှာ အောက်က ဆိုဒ်ကို သွားကြည့်လေ့လာထားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ဒီနေ့မှ ကိုသာဒင် ပေးလို့ရလာတာ။
34 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th November 2009, 12:07 am
အားရင်ဆက်ရေးပေးပါ $ƴǩǾ @ thank
35 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 15th December 2009, 11:11 am
pdf လုပ်ပြီးတင်ပေးမယ်.လို့ပြောထားတာဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါလား .. အိမ်မှာဖတ်ခြင်လို့ပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးပါဗျာ၊
36 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th December 2009, 8:41 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 66
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 78
bat program ရေးနည်းတွေ လိုက်ကြည့်နေတာ..ဒီပို့စ်က တော်တော်စုံတာပဲ....အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ
37 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th December 2009, 9:01 am
mrzoelay wrote: pdf လုပ်ပြီးတင်ပေးမယ်.လို့ပြောထားတာဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါလား .. အိမ်မှာဖတ်ခြင်လို့ပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးပါဗျာ၊
ကျနော် အခုတလော ပိုစ့်အသစ် မရေးနိုင်သေးလို့ပါ။
ကို ဘီလူး ဆီမှာတော့ PDF လုပ်ထားပြီးသားရှိနိုင်တယ်ဗျ။ ကျနော်မေးကြည့်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။
38 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 2nd January 2010, 5:01 pm
$ƴǩǾ wrote: ကို ဘီလူး ဆီမှာတော့ PDF လုပ်ထားပြီးသားရှိနိုင်တယ်ဗျ။ ကျနော်မေးကြည့်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။
PDF ကို တင်ပေးရင် ဒီဆိုက်လိပ်စာရယ် ရေးသူနာမည်ရယ်ပါ ထည့်ပြီး ebook အဖြစ်ဖန်တီးပေးပါ.... ပြီးတော့ ဒီစာအုပ်ကိုပိုပြီးပြည့်စုံအောင် ဒီမှာဝင်ရေးပေးနေတဲ့ ကုဒ်တွေကိုပါ ရေးသူနာမည်တွေနဲ့ထည့်ပြီး ပြုစုပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာပါ... ဒါမှ နောက်ဝေမျှမယ့်လူတွေက ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလဲဆိုတာကို သိမှာဖြစ်ပါတယ်... ကျနော်က အကြံပေးရုံသာဖြစ်ပါတယ်... မှားသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ... ဒီဆိုက်အမှတ်အသားနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်မြောက်အောင်ပါ.... နောက်ပြီး ကျနော်မသိလို့ပဲလားမသိဘူး.. ဒီလို Bat အကြောင်းကို စာအုပ်ထွက်တာမတွေ့ဖူးသေးပါဘူး... ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ebook လိုချင်ရင် ဒီကတင်ထားတာတွေကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် အထက်ကပြောသလို ဒီဆိုက်တံဆိပ်နာမည်လေးနဲ့ လိုချင်တာပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
39 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd January 2010, 6:49 pm
အခုလို အကြံပေးတာ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ဒီကောင်ကို သေချာ အစအဆုံ ပြန်ဖြည့်ရေးပြီးရင် စာအုပ်အနေနဲ့ လုပ်လိုက်ပါမယ်။
ဖိုရမ် တံဆိပ်လည်း ကပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
40 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd January 2010, 7:15 pm
ငါလည်းအဲဒါပြောမလို့။ ငါတို့ဖိုရမ်နာမည်နဲ့ ebooks ထုတ်မလို့။ ခက်တာက မင်းရဲ့ ပြောင်ချောင်ချောင် စကားလုံးတွေကို ဖြုတ်ပြီး စကားလုံးတည်တည်နဲ့ ရှင်းအောင်ရေးပြီးမှပဲ တင်။
နောက်ပြီး ကိုယ်ဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတာကိုရော သေချာ structure ချပြီးမှရေးပါ။ မဟုတ်ရင် နာမည်ပျက်ကိန်းမြင်လို့။ အချိန်မြန်စရာမလိုဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ တစ်နေရာရာမှာ မင်းလျာထားတာတွေကို ပြန်တင်ပါ။ ပြီးမှ အားလုံး editing လုပ်ပြီး သေချာစီစဉ်တာပေါ့။
41 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd January 2010, 7:24 pm
အေးပါဟ။ Edit လုပ်မှ ပြန်တင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။
42 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd January 2010, 9:35 pm
$ƴǩǾ wrote: အေးပါဟ။ Edit လုပ်မှ ပြန်တင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။
ကြိုက်ပီဗျို့ .. ခုလောလောဆယ်တော့ ဘက်ခ်ျ အကြောင်းလေ့လာနေတာ ဟိဟိ အီးဘွတ် ဆိုလည်း ဒေါင်းမှာပဲ ..
အားပေးနေတယ်နော် တိတ်တိတ်ကလေး [You must be registered and logged in to see this image.]
43 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th January 2010, 9:59 am
ဒါလေးကို ပြစ်ထားတာကြာပြီနော်... လူဆိုး .... :kiss
44 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th January 2010, 6:06 pm
ဟင့်။ တယ်လည်း မောင်းတဲ့လူ။ တော်တော်ဆိုးတယ်။
Database ဆိုလည်း ရေးခိုင်းလိုက် ၊ ဒါလည်း ရေးခိုင်းလိုက်နဲ့။
တားတားလည်း Naruto လို ခါကေဘူးရှိ သုံးရတော့မယ်။
45 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th January 2010, 7:27 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟင့်။ တယ်လည်း မောင်းတဲ့လူ။ တော်တော်ဆိုးတယ်။
ဟီး ... :kiss ဒါက အကင်းပဲရှိသေးတယ်... နောက်ဆို ဒီထက် လာဦးမှာ... အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုမြိတ် တစ်ယောက်ရယ်၊ Attacker ရယ်၊ Alt.332 (အလောတော် မဟုတ်တော့ပါ) ကို အရင်မောင်းဖို့လုပ်လိုက်ဦးမယ်... :dance ဒါလေးက ကြုံတိုင်းလေး ၀င်မွှေလိုက်တာ.. :exercise
တားတားလည်း Naruto လို ခါကေဘူးရှိ သုံးရတော့မယ်။ :P
အဲဒါဘာလဲဟင် ... :doh :doh တားတားနားလည်တော့ဝူး.... :screaming
46 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th January 2010, 7:33 pm
IT သမားဖြစ်နေပြီးတော့ Copy Paste လုပ်ရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဘယ့်နှယ် Clone jutsu ကိုဆွဲထည့်နေရတာလဲ $ƴǩǾ ,
ကို mars ရေ ကျွန်တော်တို့ကို မမောင်းပါနဲ့ဦး အခု Dreamwaver အတွက် လုံးပန်းနေလို့ပါ ဘာကိုလုံးပန်းနေသလဲသိချင်ရင်တော့ PM လေးပို့လိုက်ပါခညာ
47 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 26th January 2010, 7:39 pm
αℓт.332 wrote: IT သမားဖြစ်နေပြီးတော့ Copy Paste လုပ်ရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဘယ့်နှယ် Clone jutsu ကိုဆွဲထည့်နေရတာလဲ $ƴǩǾ ,
ကို mars ။ ကျွန်နော့် ညီတော် ရှင်းပြပြီးပြီနော်။ ဟီး
ဒီလိုဘဲ မန်ဂါ ဖတ်ရင်းနဲ့ Reply ပြန်လိုက်တော့ အဲဒီ့ကဟာလေးတွေပါသွားတာ။ ဒါတောင် ရာစင်းဂန်း မထည့်သေးဘူးနော်။
48 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 2:48 pm
တူနေတာတွေပေါင်း၊ မှားနေတာလေးတွေ ပြင်ပေးပီး PDF File လေးထုတ်ပေးပါလားဗျာ။ အားလုံးကောင်းပါတယ်။
49 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 6:27 pm
Member တွေကျန်တဲ့သူတွေ Force ပေးလိုက်ပါဦးဗျာ...ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်၂ ကြီးအပျင်းတစ်နေပုံရပါတယ်
50 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 6:49 pm
တားတားပေးလွန်းလို့ တူကဒီလိုပြန်ပြောတယ်.... :cry အဲဒါ တခြား မန်ဘာတွေပဲပြောတော့နော်..တားတား ဘာမှဝင်ပြောဝူး... :lipsrsealed
မြန်မြန်လုပ်ပါလို့လည်း ပြောဝူး.... :lipsrsealed
နောက်တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်နိုင်ရင် လိုချင်တယ်လို့လည်းပြောဝူး.. :lipsrsealed
ဒါကို ebook စပြီး တားတားလုပ်ဖို့ပြောတော့ တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ ဘူလေးပြောတာလဲသိဝူးနော်... လို့လည်း သားသားမေးဝူး... :lipsrsealed
အခုလိုပစ်ထားတာတော့ ကောင်းဝူး...လို့လည်း တားတားပြောဝူး... :lipsrsealed
တွေ့လား အခုတူများတွေတောင် ပြောတုန်ဘီ ... :shooting အဲလိုပြောတုန်လို့လဲ တားတားက ၀င်ပြီး force ပေးပါဆိုတာကို ၀င်ပြီး ပေးဖို့ လုပ်ဝူးနော်... :attention
အကို ဘာမှ ၀င်ပြီး ညီစွမ်းကို force မပေးဘူးနော်.... လူဆိုးလို့ပြောနဲ့တော့....
အော်ဒါနဲ့ မေ့လို့ အကိုပြောထားတဲ့ ဟိုလေ Database ကိစ္စလေးကိုလည်း မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါလို့ မပြောဘူးနော်... :lipsrsealed
51 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial]
Forumotion's free forums | Computers and Internet | Useful tricks and tips, infos | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion